जुन 9, 2019 जुन 9, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments गाजा, डा. राम बहादुर बोहरा
गाजालाई फुकुवा गरे कसो होला ? सम्पुर्ण नेपाली निरोगी भए देश पनि निरोगी हुन सक्छ । नेपाली निरोगी हुन आफ्नै भुमिमा उत्पादन भएको चाहे जडिबुटी होस या तरकारी होस् या खाद्यान्न प्रयोगमा आउनुपर्ने हुन सक्छ । आज सवै बस्तु विदेशबाट आयत हुन्छ । जडिबुटी छ प्रयोग छैन, जग्गा छ पानी छैन, खेती योग्य जमिन छ तर नहर छैन, परिवर्तन चाहेर होइन गरेर मात्र सम्भव छ । विकास कल्पनामा मात्र सिमित रहेर होइन सवै मिलेर गर्न सक्नुपर्छ ।
हिजो एकजना सक्रिय राजनीति गर्ने व्यक्तिले गाजा नष्ट गर्ने क्रममा मलाई भन्नुभयो, यसवाट थुप्रै औषधि बन्ने रहेछ भन्ने कुरा सुनेको थिए तर आज जान्दा जान्दै फाल्नु परेको छ । यदि यस्ता बस्तुलाई खुला गर्ने सके थुप्रै कम्पनिले नेपालबाट लग्ने थिए । नेपालीले राम्रो पैसा कमाउने अवसर पाउने थिए । तर प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु बिडम्बना हो । सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिन सके यसवाट प्रशस्त पैसा भित्र्याउन सकिने देखिन्छ । गाजालाई फुकुवा गर्ने वित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको गाजा लग्ने छन् । जुन वस्तुको मुल्य केहि छैन, फुकुवा हुने वित्तिकै यसको मुल्यबाट नेपालीको जीवनस्तरमा राम्रो सुधार हुनेथियो ।
जंगलमा छरिएर रहेका जडिबुटीबारे जानकारी प्राप्त गरेर छरछिमेकमा जनचेतना जगाउन सके ठूलो उपलब्धि हुने देखिन्छ । आज हामी सवै परनिर्भरपनको सिकार भएर पश्चिमाहरूको उपलब्धिलाई आत्मासाथ गर्दै करोडौं रूपैया बगाएका छौं । नेपाल पछि पर्नुको प्रमुख कारण भनेको बिदेशी राष्ट्रको नक्कल गर्नु भन्दा खासै फरक छैन । नेपालको विकासलाई केलाउदै युवा अघि बढ्न नसके ठूलो उपलब्धि नहुने मेरो विचार छ । आज नेपालको सम्पदा जडिबुटी त्यसै खेर गइरहेको छ । आज हामी प्राकृतिक सम्पदाले धनी हुदाहुदै पनि किन गरीब छौं यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरूरी छ ।
← दुखाई कम गर्ने खालका प्राकृतिक घरेलु औषधिहरु
औषधिको रुपमा बहुउपयोगी अमलाको प्रयोग →